Jereo ny tanàna tsara tarehy Strasbourg | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Strasbourg
Susana Garcia | | Frantsa, General, Inona no ho hita
La Tanàna mahafinaritra an'i Strasbourg no misy any Frantsa ary an'ny faritra manan-tantara ao Alsace. Noho ny toerana misy azy dia tanàna iray izay tena nilaina ho ivon-toeran'ny fifandraisana. Izy io no manana seranana faharoa lehibe indrindra amin'ny Ony Rhine, izay be atao indrindra eto an-tany.
Ity iray ity tanàna dia ivon'ny kolontsaina, tantara ary mpianatra. Ny ivon-toerana manan-tantara dia nambaran'ny UNESCO ho lovan'ny World Heritage Site. Tanàna manana toerana mahaliana be izy, toy ny katedraly, mahatonga azy io ho toerana mety indrindra amin'ny fialan-tsasatra.
1 Katedraly Strasbourg
3 Trano Kammerzell
4 Rohan Palace
5 Tohodrano Vauban
6 Takelaka kisarisary
7 Kianjan'i Kléber
La Katedraly Notre-Dame de Strasbourg Izy io dia amin'ny endrika gothic ary ny tantarany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-142, na dia natsangana teo amin'ny katedraly Romanesque taloha hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny endriny voalohany dia iray amin'ireo singa haingo indrindra, izay maneho tanteraka io fomba Gothic io. Misongadina ny tilikambo lakolosy miaraka amin'ny haavony XNUMX metatra. Ao anatin'ny katedraly dia miavaka ny polipitrao amin'ny fomba gothic mirehitra, ny varavarankely raozy afovoany sy ny taova. Ity katedraly ity dia eo afovoany manan-tantara
Ity faritra ity dia iray amin'ireo tsara tarehy sy manintona indrindra amin'ny tanàna iray manontolo. Rehefa tonga any La Petite France izahay dia toa mampiditra tantara iray. ny trano tsara tarehy sy manan-tantara no manana ny antsasa-hazo hazo ny fomba Rhenish tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ireo no trano fonenan'ireo mpiasan'ny tanàna taloha, saingy ankehitriny dia faritra ahitana trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana izy io, satria toerana mpizahatany ary ankafizin'ny mpitsidika izany. Izy io dia eo akaikin'ny Bridge Saint Martin sy ny Bridge Covered, satria eo akaikin'ny lakandranon'ireo reniranon'i Rhine izy io. Tsy maintsy mamakivaky ny arabe kely misy rarivato ianao, mamaky ireo tetezana ary misakafo kely any amin'ny kianja Benjamin Zix. .
Ity tranobe manana endrika Gothic ity dia nomena anarana tamin'ny tompony tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia ny tompony teo aloha aza, Braun mpanamboatra fromazy. ny Ny tapany ambany ihany no voatahiry, ary ny tapany ambony dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Misongadina amin'ny endrik'izy io miaraka amin'ny sary haingo haingon-tsoratry ny Baiboly, ny Moyen-Orient ary ny tontolo Greco-Roman. Androany dia trano fandraisam-bahiny fantatry ny hotely no misy azy.
Ity lapa ity no fonenana taloha an'ny eveka-eveka sy kardinaly. Izy io dia natsangana nandritra ny taonjato faha-XNUMX, nitaona ny maodelin'ny lapan'i Paris. Ny ao anatiny dia tena kanto, miaraka amin'ny antsipirian'ny haingon-trano maro. Amin'izao fotoana izao dia azo tsidihina izy io satria ao anatiny no misy ny Museum of Fine Arts, ny Museum Archaeological Museum ary ny Museum of Arts Haingon-trano.
Metatra vitsivitsy avy amin'ny Covered Bridges no misy ny tohodrano Vauban, izay natao hanondraka ny atsimon'ny tanàna raha ilaina izany. Ity toho-drano taloha ity naorina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary amin'izao fotoana izao dia toerana fitsidihana iraisana, any akaikin'ny Petite France. Ao an-tampony dia misy teram-panala iray hankafizanao ny fahitana ny tanàna ary ao anatiny dia afaka mahita sary sokitra vitsivitsy ianao. Tsy maintsy mandeha ny mijery azy amin'ny alina, satria hazavana izy io.
ny Ny Bridges manarona dia mametra ny Petite France ary na dia nanjavona tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo aza ny tafo, dia mbola mitazona an'io anarana io ihany izy ireo. Raha ny tokony ho izy, ny fananganana dia ampahany amin'ny rafitry ny fiarovana ny tanàna, miaraka amin'ireo galeria rakotra ho fomba fijery hijerena azy. Androany dia afaka mandeha amin'ity tetezana ity ianao, izay eo akaikin'ny tohodranon'i Vauban.
Ity dia Kianjan'ny tanàna lehibe Strasbourg, miorina eo afovoany manan-tantara, ao amin'ilay antsoina hoe Great Island of Strasbourg. Ny kianja dia nomena anarana avy amin'i Jean Baptiste Kléber, jeneraly miaramila manan-danja, izay misy sarivongana eo amin'ny kianja. Ao amin'io faritra io, miavaka ny tranon'ny Aubette, izay misy ivon-toeram-pivarotana lehibe. Raha mitsidika an'ity tanàna ity mandritra ny Krismasy isika dia ho gaga amin'ny fampisehoana jiro sy ny hazo apetraka amin'ity kianja ity.
Izany no zaridaina tranainy indrindra ao an-tanàna ary manana faritra filalaovana ho an'ny ankizy, toeram-pambolena mini, zoo, faribohitra fiotazam-boaloboka ary vano. Ao amin'ny farihy ianao dia afaka mankafy riandrom-pitiavana mahafinaritra sy mitaingina lakana. Ny pavilion Joséphine dia mampiantrano hetsika sy zava-mitranga isan-karazany. Misy koa ny Bowling Alley misy terras ary ny trano Buerehiesel, izay trano fisakafoanana gastronomika.
Mahaliana ity Tranombakoky ny zavakanto malaza miorina amin'ny trano fonenana ao Strasbourg. Azonao jerena ao amin'ny tranombakoka hoe nanao ahoana ny fiainana nentim-paharazana Strasbourg, noho izany mahaliana ny mpizahatany, satria afaka mianatra bebe kokoa momba ny tantarany sy ny kolontsainy izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita any Strasbourg
Torre del Mar sy ny ozidiny